Nest Ny Tranombarotra Ara-Barotra - Famolavolana
Ny Tranombarotra Ara-Barotra
Ny Tranombarotra Ara-Barotra Ny gorodona dia zakan'ireo matihanina roa sy mpisolo vava tokana ary ireo mpikaroka izay miantso baiko isankarazany. Safidy sy antsipirihany ireo singa dia ezaka hitazonana ny endrika ankapobeny sy ny tany ary mamelona indray ny zavakanto eo an-toerana sy ny fitaovam-panorenana. Ny fifangaroana sy ny fampiharana ny akora mifanakaiky ny tontolo iainana, ny haben'ny fisokafana, nitazona azy rehetra ny fampahatsiahivana ny toetrandro teo an-toerana mba hanao tontolo mifanaraka amin'ny famolavolana indray ireo fanao very miaraka mandrafitra ny fomba maharitra maharitra.
Anaran'ny tetikasa : Nest, Anaran'ny mpamorona : Neogenesis+Studi0261, Anaran'ny mpanjifa : Neogenesis+Studi0261.
Ny Tranombarotra Ara-Barotra Neogenesis+Studi0261 Nest